Ny fonosana Beyin dia nandoa ny karaman'ny mpiasan'izy ireo hanao ny andrana asidra nokleika
Amin'izao fotoana izao, henjana ny toe-java-misoroka sy fanaraha-maso ny valanaretina eto amin'ny faritaninay, mihamaro ny olona misafidy ny hanao asidra nokleika amin'ny volany. Mba hiantohana ny fiarovana ny mpiasa sy ialana amin'ny otrikaretina vokatry ny fitsapana foibe, ny 15 Janoary 2021,Fonosana Beyin nanao andrana asidra nioklika ho an'ny mpiasa amin'ny vola laniny manokana hamoronana tontolo iainana azo antoka ho an'ny mpiasa.
Tamin'ny 8 ora maraina tamin'ny 15, dia tonga tao amin'ny Sampana fitiliana asidra nokleika ao amin'ny distrikan'i Jingxiu ireo mpiasan'ny Beyin. Nandray fepetra fiarovana henjana ireo inspektera. Ny mpiasan'ilay orinasa dia tonga tany amin'ny hopitaly tamin'ny tampon'isa samihafa tao anatin'ny elanelam-potoana ary nosarahina iray metatra ary niandry ny santionany. Eo ambany fibaikoan'ny mpiasa eo an-toerana dia olona dimy no niditra an-tsokosoko tamin'ny toerana fizahana. , Milamina ny asa fakana santionany.
"Ny orinasa dia mila mandray anjara mavitrika amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, ary tompon'andraikitra amin'ny mpiasa sy amin'ny fiarahamonina." toky. Ho fanampin'izany, fonosana Beyin. ny siansa dia manaparitaka raharaha fisorohana valanaretina amin'ny asany. Ny ozinina sy ny birao dia misy otrikaretina isan'andro indroa isan'andro. Ireo famonoana otrikaretina sy sarontava dia apetraka ao amin'ny birao sy ozinina mba hiomanana amin'ny tahirin'ny fitaovana fisorohana ny valanaretina sy ny drafitra vonjy maika. Soso-kevitra ihany koa ny hitondran'ny mpiasa sakafo atoandro azy ireo. Miezaha tsy handray fitateram-bahoaka rehefa avy miasa, ary manamboara «firewall» hisorohana sy hifehezana ny valanaretina amin'ny lafiny rehetra.
Ny lehilahy lehibe dia olona mandray andraikitra amin'ny fiarahamonina. Ny vanim-potoana ankehitriny dia vanim-potoana sarotra amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, izay fitsapana ho an'ny orinasa rehetra. Antenaina fa ny orinasa rehetra dia afaka manatanteraka am-pahavitrihana ny andraikitra ara-tsosialy ary manome fanohanana matanjaka amin'ny fisorohana ny valanaretina. Mino izahay fa tena haharesy ity valanaretina ity!